Sarotra ve ny manomboka orinasam-barotra amin'ny tranokala?
Amin'izao fotoana izao, ny serivisy serivisy momba ny varotra an-tserasera dia tena tadiavina. Ary tsy sarotra mihitsy ny mahita tranokalam-barotra tsara amin'ny tranonkala, satria misy ny tolotra maromaro mifandraika amin'ny Internet. Ary ahoana ny amin'ny fanombohana an'ity raharaham-barotra ity? Tena sarotra ny manangana ny orinasanao manokana amin'ny tsenan'ny dizitaly? Na farafaharatsiny amin'ny alalan'ny toetra inona moa no tokony hahafantarantsika ny orinasan-tseraseran'ny tranombarotra iray azo antoka sy azo antoka? Eny, miankina izany. Eto ambany eto aho dia hamaritako ny momba izany rehetra izany, fohifohy.
Iza no manam-pahaizana momba ny varotra an-tserasera?
Ny ankamaroantsika dia te hividy manam-pahaizana iray matihanina amin'ny marketing dizitaly mba hiatrehana ny fampiroboroboana amin'ny aterineto rehetra amin'ny fananganana ny tetikady amin'ny fampiharana ny lafiny tokana amin'ny drafitry ny varotra ary indraindray ny fitantanana maharitra matetika amin'ny fomba samirery. Toa tsotra izao ny zava-drehetra - rehefa nahita ny orinasam-pambolena ara-barotra hentitra ianao, ny tetikasanao an-tserasera dia hanomboka hikirakiran'ny ekipa manam-pahaizana momba ny varotra dizitaly. Amin'ny ankapobeny, ny alàlan'ny serivisy orinasa na serivisy serivisy dia mampiasa ireto tetikady manaraka ireto: SMM (tambajotra sosialy), SEO (fikarohana finday), tranonkala fampiroboroboana ny tranokala, marketing, mailaka marketing, fampiroboroboana ny bilaogy, PPC (mividy fampidiram-pejy), sns.
Ny fametrahana orinasam-barotra amin'ny tranokala dia midika fa ny tetikasam-pandraharahana dia hikarakara hetsika isan-karazany, soso-kevitra sy dingana azo ampiharina mba hamantarana ireo sehatra fampandrosoana indrindra ary hamolavola teti-bola ara-barotra manokana mifanaraka amin'ny filànao ankehitriny ny orinasa, ary ny tanjona faratampony. Amin'izany fomba izany, ny orinasa rehetra dia afaka mihazakazaka eo amin'ny fametrahana ny teti-bola sy ny tetika ara-barotra, izay mitazona ny tetikasa manontolo amin'ny alàlan'ny fanavaozana mialoha amin'ny Google, ary koa ny toe-javatra hafa mifandraika amin'ny sehatry ny fikarohana Optimization. Ny fanombohana ny raharaham-barotra nataonao manokana ao amin'ny orinasa dia tsy asa goavana, saingy mbola mila fahalalana fototra fototra momba ilay lohahevitra. Noho izany, alohan'ny handraisanao ny fanapahan-kevitra, manoro hevitra aho handinika ireto sosokevitra manaraka ireto.
Ny tombontsoa amin'ny fanombohana ny orinasanao ara-barotra amin'ny tranokala:
fandaniana teti-bola be loatra ho an'ny vanim-potoana fanombohana;
ny fikojakojana ambany tsy misy fandaniana loatra;
mitohy manatsara ny fangatahana amin'ny serivisy momba ny varotra an-tserasera;
ny fandaharam-potoana ara-potoana ara-potoana tsy misy fetran'ny faritra na fotoana fohy
Vitsy kely sisa no manomboka sy mitantana ny orinasa:
ny fahombiazan'ny tetikasa ho sarotra mandritra ny dingana voalohan'ny fanombohana;
Mety ho fanamby tena izy ny hanomboka hifandray amin'ny tena mpanjifany amin'ny voalohany;
tsy fahampian'ny fahaiza-manao azo ampiharina sy ny fahalalana an-dàlambe momba ny indostria;
ny fampiroboroboana ny varotra an-tserasera dia azo ampiharina amin'ny fitomboana eo amin'ny fitomboana, ary noho izany dia manofana mpandraharaha mpanampy na fanofanana mpikambana vaovao;
ny fahafaha-mandresy lahatra dia manaporofo ny fandrosoana ho an'ny mpanjifanao amin'ny fampiasana ny angon-drakitra hita ao amin'ny tranonkalany amin'ny aterineto;
tokony ho voatolotra manontolo ho an'ny orinasan-tseraseran'ny tranonkalanao ianao, satria ny fampivoarana haingana ny indostrialy dia hihatra hatrany amin'ny fijerena ny fironana rehetra amin'ny aterineto vao haingana sy ny famoahana farany ireo fitaovana mifandraika amin'ny indostria sy ny rafitra Source .